Handizvide! | Martech Zone
Chitatu, Kurume 14, 2012 Chitatu, Kurume 14, 2012 Douglas Karr
Aya ndiwo mamwe mazwi akanyanya kuipa mana aungambonzwa seanoshanda kubva kumutengi wako. Hauzombojairwi nazvo kunyangwe zvichingoitika kazhinji. Vanhu vanoshandira vagadziri kuti vaite iyo hazviiti… Dhonza chiono kubva mumisoro yavo ndokuchiisa mumufananidzo, saiti, vhidhiyo kana kunyangwe mucherechedzo.
Zvakaipisisa, kashoma mhinduro inoposha. Izvo hazvina basa kuti unozvida kana kwete. Chero bedzi dhizaini isiri kuzokuvadza zita rako uye rakagadzirwa zvine hunyanzvi, unofanirwa kumedza kudada kwako - nemaonero ako - uye uone zvinoitika. Vagadziri iboka risinganzwisisike… zuva rega rega rinosangana nezvakawanda zvisina hanya kupfuura avhareji yekusimuka-komiki. Kusiyana nekomiki, dhizaini anofanira kukumbira mhinduro (aka heckling).
Heano mamwe matipi ekukubatsira kutsungirira nekutendera dhizaini dhizaini:
Pfungwa dzako dzinogona haana kuitwazve munyika chaiko chaizvo. Ever.
Uri kwete mugadziri. Mikana iripo, ivo do ziva zviri nani.
Dhizaini iri kwete zvako. Dhizaini iri kune vateereri vako.
Dhizaina mukuru anoshanda nesimba kuzadzikisa zvinangwa zvekugadzirwa uku achivaraidza zvikumbiro zvako nemhinduro… kwete dhizaini kune zvaunokumbira.
Kupa yako dhizaina ne rusununguko kuve nehunyanzvi kunounza zvakanakisa kubuda.
Tarisa pane zvabuda mukugadzirwa, kwete dhizaini pachayo, kuyera kubudirira kwayo.
Kana iwe uchiremerwa wakapihwa iko kuiswa kweyakagadzirwa uye ikasashanda, usapa mhosva iye mugadziri.
Sevanhu vebhizinesi, iwe kazhinji unofunga iwe unoziva zvirinani. Kana iwe uchibudirira, dzimwe nguva zvakatonyanya kuoma kubuda munzira uye tendera yako dhizaini kuti ishande. Sezvo isu tinokudziridza infographics nemasaiti, ini kazhinji handifarire izvo zvakagadzirwa… asi ini zvakare ndinoninipiswa kuti pandinopinda munzira panzvimbo kubuda munzira, magadzirirwo anokundikana.
Vakuru vagadziri vanobvunza matani emibvunzo uye vanogona kutopa imwe mienzaniso, madhiri uye iterations yemhinduro yako. Ini handisi kuyedza kutaura newe kuti uise mari mune dhizaini iwe yaunoshora; mushure mezvose, uri kuribhadharira uye unofanirwa kurarama nayo. Asi kana iri dhizaini inoshanda uye isiri yako maitiro, tora mukana uye ona zvinoitika!
Uye edza kuti usati, "Handizvide!".
Tags: patanikwakajeka patanimuenzanisoinfographicseweb Design
WordPress Emergency Password Chinyorwa
Mar 18, 2012 pa 10: 22 AM
Haugone kubvumirana newe zvimwe, Douglas. Vatengi vanowanzoita kunge vanoshandira mugadziri kuitira kuti mutengi agadzire yavo yega, nepo hunyanzvi hwekugadzira hwuchikandirwa vachida kwavo kwehunyanzvi hweAdobe. Vatengi vanokundikana kunzwisisa kuti mugadziri anokwanisa haangongoziva maturusi avo - vanoziva zvakare "dhizaini," chinova chikamu chikuru chebasa ravo. Uyezve, vatengi KAZVI vanokanganwa dhizaini ndeyevateereri vavo, kwete ivo.
Padivi remafiripi, vagadziri uye / kana maneja weprojekiti vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti vari kukodzera vatengi vavo uye nekutaurirana navo nepose pavanogona napo. Vatengi havawanzo kuziva nzira yekutaura zvinangwa zvavo, saka hunyanzvi kutaurirana nevatengi kunofanirwa. Zvakare, vazhinji ve "vagadziri" vanoshaya mucherechedzo, kana handizvo zvavanotaura ivo, uye havagone kugadzira chidimbu chinotaridzika chinozadzisa chero chinangwa chemutengi, zvisinei nekuti zvataurwa zvakadii. Ini ndinofunga vamwe vatengi vanogona kunge vaneta neizvi, futi.
Mar 18, 2012 pa 12: 43 PM
Iwe hausi mutengi wako.
Kana iwe usingazvifarire, saka chii?
Zvakaoma kubvuma-asi ichokwadi!
Mar 19, 2012 pa 6: 31 AM
Zvakanaka, mutengi anogara achienda uko kwaanowana rutsigiro uye ndine chokwadi chekuti munhu wese anoziva izvi. Asi imwe nguva isu tinowirirana nemutengi pasina kuwana chero kobiri rimwe chete. Sezvo kwandiri "Vimba" ishoko rakakosha mubhizinesi.
Mar 22, 2012 pa 12: 26 PM
Ini handidi kukuudza kangani mushure mekuona chimwe chinhu chandinobvunza nezve iyi tweak kana iyo tweak kana pfungwa kumashure kwayo chete kuwana mhinduro yakafanana ne "Ndakaedza izvo kare" "Hazvina kushanda nekuti" uye pane imwe nguva yakapihwa ipapo ipapo saved muenzaniso weizvo chaizvo zvandataura kuti ndikwanise kuzvionera. Mushure mekumberi kwezvikumbiro maererano nezve akasiyana mapurojekiti Ive ndakatanga kusatombo bvunza zvinhu zvakare nekuti pakupedzisira ivo vanoziva zvakanyanya.
Zvakare Id wedzera dont pigeon hole mugadziri wako kana boka rekugadzira nekusavapa sarudzo dzakaringana kana mhinduro kumberi.